Wzọ 5 Snapchat nwere ike iji kwalite azụmahịa gị | Martech Zone
Wzọ 5 Snapchat nwere ike iji kwalite azụmahịa gị
Na Tọzdee, Septemba 20, 2016 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Dika nyiwe igwe mmadu na-ebili na ewu ewu, enwere ohere iji ohere ikpo okwu na-ekwurita okwu na ndi soro ha. O doro anya na Snapchat karịrị atụmanya ahụ, yana ihe karịrị 100 nde ndị ọrụ kwa ụbọchị na-ele ihe karịrị vidio 8 kwa ụbọchị.
Snapchat na-enye ụdị na ndị na-emepụta ọdịnaya ohere kee, kwalite, kwụọ ụgwọ, kesaa, na leverage ike mmekọrịta mmekọrịta pụrụ iche nke ikpo okwu.
Kedu ka ndị ahịa na-eji Snapchat?
M2 Na-ejide Australia ekerịtala nnukwu infographic, Kedu ka Snapchat nwere ike isi gbasaa ụdị gị, wee nye ụzọ ise ndị ụlọ ọrụ gị nwere ike iji Snapchat.
Nye ohere ka ihe omume dị ndụ - kpalie ndị na-ege gị ntị site na iji echiche ziri ezi maka mkpọpụta ngwaahịa, ngosipụta azụmaahịa, ma ọ bụ ihe omume otu ụdị.
Napụta ọdịnaya nkeonwe - nye ndi na-ege gi nti ihe puru iche ma obu puru iche nke ha ghara inweta na nyiwe ndi ozo.
Nye asọmpi, elele ma ọ bụ nkwalite - nye koodu nkwado ma ọ bụ ego maka ndị fan. Inye ego na nkwalite bụ ụzọ ị nwere ike isi mee ka ụmụazụ gị laghachite.
Were ndị mmadụ n'azụ Mpaghara - mee ndị na-ege gị ntị aka site n’inye ọdịnaya dị n’azụ ma gosipụta otu akara gị si dị iche.
Onye mmekorita ya na Snapchat influencers - ọkà Ndị na-emetụta Snapchat nwere ike inyere gị aka ịgbasa mmata na ọnụọgụ mmadụ nke siri ike iru site na mgbasa ozi ọdịnala.
Tags: snapchatsnapchat ahia
Adobe Spark: Social Graphics, Akụkọ Web na Vidio Animated
Sep 21, 2016 na 5: 16 AM
Edemede ederede na-enye nkọwa. Ekwenyere m na gị na ịrị elu na ntanetị mgbasa ozi mgbasa ozi na-ewu ewu, enwere ohere mgbe niile iji jiri ikpo okwu na-ekwurịta okwu ma soro ndị nwere ike ịzụta ihe. A Snapchat bụ a na-ewu ewu na-elekọta mmadụ media netwọk na-enye gị ohere ịkọrọ videos na foto na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ. Ọ bụla smart ekwentị ọrụ ele dịkarịa ala otu video kwa ụbọchị. Enwere m mmasị na isi ise a tụlere n'isiokwu a dị ka otu ụdị si eji snapchat. Ulo oru na eji snapchat maka nkwalite ngwa ahia yana izisa ọdịnaya nke onwe. Guo njikọ a: https://www.animatedvideo.com/blog/numbers-branding-snapchat/
Njikọ a na-enye ohere nnabata nke snapchat.